गुलपियुरी बीच, अस्टुरियसको मोती | यात्रा समाचार
फोटोले यो सबै भन्छ। यो समुद्री किनार महान छ र अधिक सुन्दर हुन सक्दैन। स्पेनमा त्यस्ता विशेष समुद्री तटहरू छन्, तिनीहरूलाई खोज्न टाढा जान आवश्यक छैन। गुलपियुरी बीच यो देशको उत्तरमा अस्टुरियसमा छ। के तिमी उसलाई चिन्छौ?
तपाइँ यसलाई मनमा राख्न सक्नुहुन्छ जब जाडो समाप्त हुन्छ र तपाइँ तपाइँको गर्मी बिदा वा getaways योजना शुरू। सबै अस्टुरियस, वास्तवमा, किनकि स्पेनको यो अंश एक वास्तविक प्राकृतिक स्वर्ग हो, घर बाहिर र प्राकृतिक प्रकृति आनन्दको लागि उत्तम। हेरौं यो कहाँ छ, कसरी पुग्ने र गुलपियुरीमा के गर्न सकिन्छ।
1 कसरी गुलपियुरी बीचमा पुग्ने
2 गुलपियुरी बीच
3 गुलपियुरी बीच क्षेत्रमा बस्नुहोस्
कसरी गुलपियुरी बीचमा पुग्ने
जिज्ञासु समुद्र तट यो नाभिस शहरको नजिक छ र शीर्षक होल्ड गर्दछ राष्ट्रिय स्मारक २००१ देखि। यसले पनि एकीकृत गर्दछ अस्टुरियसको पूर्वी तटको संरक्षित ल्याण्डस्केप त्यसैले यो एक सुरक्षित समुद्र तट हो जुन प्रदूषित वा परिमार्जन हुन हुदैन।
यदि तपाईं पहिले नै यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र यसको समुद्री तटहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ तपाईं त्यहाँ स्यान एन्टोलनको समुद्री किनारबाट हिंड्नुहोस्, १२०० मिटर लामो क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो। यो समुद्र तट हो जुन क्यान्टाब्रियन समुद्री किनारमा पर्दछ, त्यसैले बलियो छालहरूदेखि सावधान रहनुहोस्। धेरै छुट्टीहरू सान एन्टोलनमा आउँदछन् यसको दुई समुद्री किनारहरू, यो एक र पोर्टाकोस, यसको नयाँ ट्राउट भरिएको संग मजा लिन। यदि तपाईं वरिपरि हुनुहुन्न भने यो क्यान्टाब्रियन राजमार्गबाट ​​पुगेको छ Llanes देखि १ 14 किलोमिटर मात्र नाभिसमा।
त्यहाँ समुद्री किनारमा पुग्न संकेतहरू छन् र केही अंश मार्ग प्रशस्त छ, जबकि एक बिन्दुमा सहजता समाप्त हुन्छ, तपाईं कार छोडनुहुन्छ र यो तपाईंको पछाडिको जंक (झोला र छाता) सँग हिंड्ने समय हो। तपाईं करीव २०० मिटर पैदल यात्रा गर्नुपर्दछ र तपाईं गुलपियुरी बीचमा पुग्नुहुनेछ। तपाईं त्यहाँ AS-200 सडकबाट पनि पुग्न सक्नुहुनेछ जुन अस्टुरियस शहरहरू जोड्ने मालीजस्तै हारमा।
यो सुन्दर बिच कस्तो छ? यो छ सानो, सानो यो विशेषण हो जुन फिट पनि हुन्छ। त्यसोभए, तपाइँ छिट्टै जानुहोस् वा यो एक्लो महसुस गर्न को लागी मोती बन्नु हुँदैन भन्ने बानीमा पर्नु पर्छ। एक हो समुद्री तट तर अन्तर्देशीय अवस्थित छ। यो कृषि लाई समर्पित क्षेत्रहरु बीच छुपाइएको छ, चूना ढु coast्गाको किनारमा कि समुद्र अझै खस्छ र गुफाको भित्री भागमा झन् झन् बढ्दै गयो जुन समयको अन्तमा अन्तमा दम तोकियो।
केही समय अघि गुफाको यो पतनले किनारबाट १०० मिटर टाढा रहेको 50० मिटर व्यासको प्वाललाई आकार दियो। यो भूगर्भीय गठन यस रूपमा चिनिन्छ सिन्खोल। यस दूरीको बावजुद दुबै पोइन्टहरू एकताबद्ध छन् त्यसैले किन समुद्रको पानी गुफाको भग्नावशेषमा प्रवेश गर्न जारी छ, बालुवा बोकेको, उठेको र ज्वारको अनुसार गिर।
समुद्र तट यो 50० मिटर भन्दा बढि छैन लामो र यो अनमोल छ। क्यान्टाब्रियन समुद्री पानी यसमा ढु the्गाको प्रोफाइलमा बनाइएको सुरुnel भएर भित्र पस्दछ, चट्टानहरू जसबाट कोही हिड्न पनि सक्छ। हामी त्यसपछि सुन्नेछौं परीक्षकजसरी अस्टुरियनहरू आवाज भन्छन् कि पानीले ती ढु rock्गा सुरु throughहरूमा बजारमा थिच्दा त्यसले बनाउँछ।
किनकि यो एक अपेक्षाकृत पृथक समुद्र तट हो यो राम्रोसँग संरक्षित छ। यो सानो छ र पनि उथला त्यसैले पौडी खेल्न सक्षम हुनु हुँदैन, पानी त्यसको लागि त्यस्तो गहिरा छैन। यदि तपाईलाइ मनपर्‍यो भने, फ्याँक्न र भिज्ने बारे, अधिक पौडी खेल्नको बारे बढी हो। अनि कसरी हावाबाट सुरक्षित छ बच्चाहरूसँग जानका लागि यो उत्तम छ। जब त्यहाँ कम ज्वार हुन्छ पानी पानी हराउछ र यदि ज्वार, त्यसको विपरित, अग्लो, यो हुन सक्छ कि पानी बालुवाको पार घाँसमा पुग्न सक्छ। एक विचित्र सानो स्वर्ग।
त्यहाँ एक व्यक्तिले गुलपियुरो सागर, अटलान्टिक महासागरमा जोडिएको महाद्वीप समुद्री र यसको उत्तरी तटमा र यसको दक्षिणी तटमा एउटा सानो समुद्री किनार सजावटको साथ जोडिएको महासागरको बारेमा बोल्न सक्ने विचार गर्छन्। ओह, र तिनीहरू यसलाई संसारको सब भन्दा सानो समुद्र भन्छन्। तिम्रो के बिचार छ?
गुलपियुरी बीच क्षेत्रमा बस्नुहोस्
यदि तपाइँ यहाँ रहन चाहानुहुन्छ भने तपाई ब्यारो, लिलान्स वा नाभिस जस्ता शहरहरूमा आवास खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ छन् ग्रामीण घरहरू जहाँसुकै र यदि तपाईं ठूला केहि चाहानुहुन्छ भने तपाईं लालान्समा देख्न सक्नुहुन्छ, गुलपियुरीबाट १२ किलोमिटर टाढा, किनकि यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सहर हो, जहाँ बार, साइडर घरहरू र रेस्टुरेन्टहरू, एक सुन्दर दृश्य मार्ग र पर्खाल मध्यकालीन ie12० को साथ पुरानो शहर हो। मिटर
तर यदि तपाईं केहि बढी एक्जुटको लागि खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो हिड्ने र केहि खोज्ने कुरा हो होटल वा भाडाको अपार्टमेन्ट किनकि तिनीहरू सम्पूर्ण तटमा प्रशस्त छन्। अस्टुरियस यो गर्मीमा बिताउनको लागि रमाइलो गन्तव्य हो जुन मैले सुरुमा भनेको थिएँ, विशेष गरी यदि तपाईं प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ। यो हो कि यसले पहाडहरू र तटहरू संयोजन गर्दछ र युनेस्कोले यसको सब भन्दा सुन्दर परिदृश्यलाई बायोस्फीयर रिजर्भको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ।
उदाहरण को लागी, पिकोस डी यूरोपा नेश्नल पार्क, सोमिडो नेचुरल पार्क, मुनिलोस इन्टिग्रल नेचुरल रिजर्व, Redes Natural Park वा Las Uniñas-La Mesa, उदाहरण को लागी। त्यसोभए तपाईले देख्नु भयो कि समुद्र र पहाडहरूको बीचमा तपाईसँग धेरै बाहिरी गतिविधिहरू छन्। र जब तपाईं फिर्ता आउनु हुन्छ र खान बाहिर जानुहुन्छ यो आनन्द लिने समय हो अस्टुरियन ग्यास्ट्रोनोमी कसलाई स्थानीय, स्पेनिस, नर्मन र ब्रेटन पक्राउहरू प्रस्तुत गर्ने बारे थाहा छ।
प्रयास नगरीकन अस्टुरियस नछोड्नुहोस् Fabada, सुँगुर र रगत सॉसेजको साथ सेतो बीन स्ट्यू, अन्य सामग्रीहरू माझ, माछा, गाईको मासु, कारीगर चिज (केही मूलको पदनाम सहित), क्रेप्स सुकेको फलहरु को रूपमा चिनिन्छ क्यासिडिएल्स वा स्वादिष्ट इम्पानेडास। स्पष्ट, सबै राम्रो संग पानी पिए साइडर, सबै भन्दा अस्थिर पेय।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » España » गुलपियुरी बीच, अस्टुरियसको मोती